Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Australia » Naadiga Wyndham Flynns Beach Resort ayaa labanlaabmay baaxadda
Wararka Australia • Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • jiga
Naadiga Wyndham Flynns Beach waxay diyaar u tahay inay safarro badan keento gobolka Port Macquarie. Port Macquarie waa magaalo xeebeed ku taal aagga dawladda hoose ee Port Macquarie-Hastings. Waxay ku taalaa Badhtamaha Xeebta Dhexe ee New South Wales, Australia, qiyaastii 390 km waqooyi ka xigta Sydney, iyo 570 km koonfur Brisbane, Australia.
Horumarka Naadiga Wyndham Flynns Beach wuxuu ku daray 53 hal ilaa afar qol oo jiif ah, iyadoo 20 loo qoondeeyay Deluxe, 25 Grand, iyo siddeed Madaxweyne. Guryaha Madaxtooyadda ee afarta qol ah, gaar ahaan, waxaa loogu talagalay inay yihiin badeecad aan la barbardhigi karin gobolka dhexdiisa, oo ay ku jiraan afar qol oo waasac ah, afar musqulood, jiko buuxa, tas-hiilaad dhar-dhaqid, sagxad dabaq ah oo gaar loo leeyahay oo leh isboorti dibadda ah, iyo balakoon weyn oo sare , iyo rakibidda iyo dhammaynta sare.
In ku dhow laba sano, horumarinta $ 25 milyan waxay shaqo siisay 220 xirfadlayaal iyo xirfadlayaal ah waxayna ballaarisay hoyga loo dalxiis tago 113 guri iyo filooyin. Mashruucu wuxuu kaloo arkay abuuritaanka makhaayad cusub, aagga ciyaaraha, barkadda carruurta, taambuugyada meelaha la wadaago iyo baarkinka baabuurta, iyo sidoo kale jimicsi la cusbooneysiiyay iyo soo dhaweyn dib loo habeeyay.
“Horumarkaan iyo masiibada COVID-19 ka hor, dalxiisku wuxuu ku raaxeystay heerar degenaansho oo ka badan 90 boqolkiiba celcelis ahaan wuxuuna si toos ah ama si dadban ugu deeqay dhaqaalihii deegaanka $ 20 milyan sanadkii-tiradaas oo aan hadda filayno kordhinta, ”ayuu yiri Barry Robinson, Madaxweynaha iyo Agaasimaha Maareynta, Hawlgallada Caalamiga ah ee Goobaha Wyndham.
“Marka lagu daro hoygan qaaliga ah, abuurista tas-hiilaad cusub iyo wanaajinta kuwa hadda jira, waxaan aaminsanahay inay soo jiidan doonto baahi weyn oo loo qabo dalxiiskeenna, taas oo aan sameyno, kor u qaadno quruxda Port Macquarie, taasoo kor u qaadi doonta gobolka kadib COVID -19 soo kabashada. ”
Mashruucu wuxuu bilaabmay bishii Maajo 2019 laakiin soo-saaraha, Wyndham Destinations Asia Pacific, wuxuu go'aansaday inuu horay u sii wado shaqooyinka inta lagu jiro masiibada COVID-19 iyadoo la rajeynayo in aaggu la kulmi doono soo kabasho buuxda.
“Horumarkan oo kor u dhaafaya $ 25 milyan wuxuu muujinayaa kalsoonida Wyndham Destinations uu ku leeyahay Port Macquarie Hastings oo ah meesha ugu horreysa dalxiiska ee New South Wales,” ayuu yiri Duqa Magaalada Peta Pinson.
“Mashruucu wuxuu bixiyay dhiirrigelin dhaqaale oo ay si weyn u soo dhaweeyeen bulshadeena, shaqooyin badan oo maxalli ah iyo soo jiidasho cusub soo -booqdeyaashayada. Tani waxay wax weyn ku soo kordhisay gobolkeenna, iyadoo lala kaashanayo dhowr mashruuc oo malaayiin doollar ah oo gobolkeennu arko xilligan. ”
Naadiga Wyndham Flynns Beach waxay ku taal Badhtamaha Badhtamaha Waqooyiga New South Wales, kaliya duulimaad hal saac ah ama waddo afar saacadood ah oo ka socota Sydney. Waxay bixisaa adeegyo kala duwan, dadaallo saaxiibtinimo u leh qoyska iyo kiraynta bilaashka ah ee qalabka iyo cayaaraha kala duwan.
Naadiga Wyndham South Pacific waxaa maamula Wyndham Destinations Asia Pacific, qayb